ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: May 2010
Religious Myanmar Sites
Useful Myanmar Websites
Technology & Download
စာရေးသူ ချမ်းလင်းနေ အချိန် 11:50 PM No comments :
တံဆိပ်များ သမိုင်းအစအန , နိုင်ငံရေးနှင့်သမိုင်းများ
အသိုက် နှင့် အမေ့အလွမ်းသင်ရိုး တမ်းချင်း
အမေများနေ့ ရောက်ပြန်ပြီ မေမေ။
မေမေ့ မွေးကျေးဇူး ၊ ကျွေးကျေးဇူး
မေမေ ခွင့်လွှတ်နားလည်ပါစေ မေမေ။
တုနှိုင်းမရ မေမေ့ မေတ္တာတွေ
ခဏခဏ ငတ်မွတ်နေတယ် မေမေ။
အမေထွက်သွားတဲ့လမ်း မျော်မှန်းတမ်းတနေမိတယ် မေမေ။
တနေရာမှာလေ "တမ်းချင်းမြစ်" ဖြစ်လို့ပေါ့။
လူတွေအတွက်သာ တနေထွက် တနေဝင် အလုပ်ပြီးသွားကြပေမယ့်
အမေ့ အလုပ်ကတော့ ထာဝရ မပြီးနိုင်ဘူး။
လူသားတွေအတွက်သာ အချစ်သစ် အချစ်ဟောင်း ပြောင်းလဲသွားကြပေမယ့်
အမေ့ အချစ်ကတော့ ထာဝရ မအိုဟောင်းနိုင်ဘူး။
စာရေးသူ Unknown အချိန် 10:42 AM 8 comments :
တံဆိပ်များ ကဗျာ , မေမေ
စာရေးသူ Unknown အချိန် 9:08 AM 10 comments :
Chan Lin Nay
For Help In Burma
My Other's Links
Giacomo Book Store
Interview with VOA for Collection of Dictionary
Brahmavihara Monastery, Thayargone (Naygyar) Street, Pazundaung Township. 959 5027445, 959 73173946, 959 5053200
စုဆောင်းမိခဲ့သမျှ အဘိဓာန်များ (PDF)
၂၀၁၂ ဒီမိုကရေစီဆုပေးပွဲ နှင့် သတင်းဓာတ်ပုံများ
ဆရာမ ခင်ခင်ထူး၏ စာအုပ်များ
မြန်မာ စာရေးဆရာ၊ ဆရာမများ၏ စာပေဟောပြောပွဲများ အပိုင်း(၁)
အရှေ့တောင်အာရှတွင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု တိုက်ဖျက်ခြင်း
သံဃာတော်တို့ရဲ့အချိန်ကာလ၊ မြန်မာပြည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်
ဖေမြင့် - မရဏနုဿတိနှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ
မြန်မာဝတ္ထုတို(၁၉၁၂ - ၁၉၆၄) ပထမအုပ်
☏ ဟစ်တိုင် ☏
မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်အွန်လိုင်း
ဝီကီမြန်မာ Wiki Myanmar
Mac Iphone (3)
ကဗျာ ( 45 )
ကဗျာရှည် (2)
ကိုငှက်၏ကဗျာ (7)
စာအုပ်များ ( 37 )
စာပေဟောပြောပွဲများ ( 11 )
စုံစီနဖာ ( 10 )
ဆရာမ ခင်ခင်ထူး၏ စာအုပ်များ ( 1 )
ဇာဂနာ ( 8 )
တက်ခ်ပိုစ် (4)
တာရာမင်းဝေ၏ စာအုပ်များ ( 1 )
တိုင်းရင်းသားများသတင်း (9)
ဗဟုသုတ ( 25 )
ဘာသာပြန် (3)
ဘာသာရေး ( 17 )
မိတ္ထူ (9)
မြန်မာဆိုဒ်များ (5)
ရုပ်ရှင် ( 47 )
ဝတ္ထုတို ( 20 )
ဝတ္ထုရှည် (4)
သမိုင်းဝင်မည့် မိန့်ခွန်းများ ( 31 )
သမိုင်းအစအန ( 143 )
သီချင်း ( 12 )
အက်ဆေး (6)
အကြည်တော်၏ စာအုပ်များ ( 1 )
အဘိဓာန် (3)
အမေစု ( 37 )
ဧရာဝတီ (7)
ဆောင်းပါး ( 31 )
ဆောဒ့်ဝဲ ( 11 )
မောင်သိန်းဇော် ကဗျာများ ( 1 )
မေမေ (7)
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ( 25 )
နိုင်ငံရေးနှင့်သမိုင်းများ ( 237 )
ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမြတ်ဗုဒ္ဓ ဓမ္မရသမြတ်ဗုဒ္ဓကို ကြည်ညိုခြင်းဗုဒ္ဓကိုကြည်ညိုခြင်းဗုဒ္ဓသာသနာအကြောင်း သူတော်ကောင်းတရားများဗုဒ္ဓ ဓမ္မ သံဃာ့ လောကအသင်းကြီးဓမ္မလက်ဆောင်ဓမ္မအလင်းရောင်ဓမ္မရနံဓမ္မရိပ်ဓမ္မလင်းရောင်ခြည်ဓမ္မဌာနေဓမ္မဟေဝန်ဓမ္မစကားဓမ္မမေတ္တာဓမ္မကုန်းမြေဓမ္မဥယျာဉ် ဓမ္မပန်းခင်း ဗုဒ္ဓစာကြည့်တိုက်ဓမ္မဥပဒေပြန့်ပွားရေးအသင်းချုပ်ဓမ္မပဒပါဠိတော်မဟာလယ်တီ ဒီပနီကျမ်းစာဓမ္မဒူတ လူငယ်များအသင်းဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား)အရှင်ကုမာရအရှင်ဝိစိတ္တ (Korea)မြတ်ရောင်နီအရှင်လောကနာထအရှင်နန္ဒသာရ(သစ္စာရောင်ခြည်) အရှင်ကောဝိဒ(မြိတ်)အရှင်ကောဝိဒ၏ပညာဒါနအရှင်ဦးဥတ္တမသာရအရှင်ကုသလသာမိ (ပျော်ဘွယ်)အရှင်ဉာဏဒီပ (ဓမ္မရတနာ)အရှင်သာဓိန(အလင်းသစ်)အရှင်ခေမိန္ဒ (မော်ကွန်းသစ်)အရှင်ဝိစိတ္တသာရ(ဓမ္မဂင်္ဂါ ) အရှင်ဓမ္မသာမိ(အင်္လကာ) ရဝေနွယ်(အင်းမ)သာမဏေကျော်စာသင်တိုက်တရားတော်သုခကာမီဥပသကာဝိမုတ္တိရသစန္ဒာသူရိယမြတ်ပန်းရဂုံ (ဓမ္မသာကစ္ဆာသဘင်)သစ္စာတရားများစုဝေးရာယောအသင်းစစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းဝါတွင်းအင်္ဂါပတ် ဆွမ်းလောင်းမြန်မာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များအသင်း ထေရ၀ါဒ တို့တိုင်းပြည်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းပညာရံသီဝိဟာရ စိတ္တသုခဘုန်းကြီးကျောင်းဗုဒ္ဓသာသနာ့ရံသီ ဗုဒ္ဓဓမ္မရံသီ(ဖန်လန်)ဓမ္မဝါဒီ အောင်မြေမင်္ဂလာ ဓမ္မရသ ဝိဟာရကျောင်းဓမ္မရောင်ခြည်ကျောင်းညောင်ကန်အေး(ဂျိုဟိုး)သီတဂူဓမ္မ၀ိဟာရကျောင်းသီတဂူသတင်းသီတဂူစတားမိုးကုတ် ရိပ်သာအဖွဲ့ချုပ်ပတ္တမြားရိပ်သာ (မိုးကုတ်)မဟာစည် ရိပ်သာအဖွဲ့ချုပ်ညောင်ကန်အေး(မဟာစည်)ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ(မဟာစည်)အေးရိပ်ချောင်(မဟာစည်)သဲအင်းဂူ ဝိပဿနာကန္နီသမထဝိပဿနာမြေဇင်း ဝိပဿနာကသစ်ဝိုင် ဝိပဿနာ ထေရဝါဒတက္ကသိုလ်ကလေးဝ တောရလောကချမ်းသာအနှိုင်းမဲ့ချမ်းသာအဖြူရောင်မေတ္တာသစ္စာအလင်းသုခရိပ်ချယ်ရီမြို့တော်နေခြည်သွေးသစ်သရုပ်ပြ အဘိဓာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရွှေတိဂုံပါရမီဖြည့် မပြီးဆုံးသောနေ့ရက်များတရား၌မွေ့လျော်ခြင်းပျော်ဘွယ်ဆရာတော်ငြိမ်းချမ်းစွာရွက်ဝါမနက်ဖြန်ရည်ရွယ်ရာမင်္ဂလာသတင်းစဉ်အေးငြိမ်းပျော်ရွှင်စေတနာသုခ ဇီဝိတသံဃာ့ဆေးရုံကြီးဇမ္ဗူသီရိမြတ်ရတနာဓမ္မဒါနဓမ္မရံသီစာမျက်နှာ ဓမ္မရသနိဗ္ဗာနနိဗ္ဗာနဓမ္မ မိုးကုတ်(လန်ဒန်)မြန်မာ့ရတနာအရှင်လောကနာထ အောင်မြေပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် အနတ္တလက္ခဏသုတ်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာ BuddhaNet Dhamma DownloadDhamma WebDhammaWebBooksDhammaDownloadDhamma EnglishBuddha NetE-DhammaGolden WordsOne Dollar Fund The Best Friendပညာပါရမီ
စာအုပ်စင်များ မြန်မာအီးဘွခ် မြန်မာရခိုင်များ ရွှေစကား နေ့သစ်စာအုပ်စင် အဖြူရောင်မေတ္တာ အံဘုန်းမြတ်စာအုပ်စင် အိပ်မက်လှိုင်းစာအုပ်စင် ဝိညာဉ်သစ်စာအုပ်စင် ဗမာ့ကြယ်ကွန်ယက်စာအုပ်စင် ဓမ္မပဒ ပါဠိတော် မြန်မာပြန်အင်္ဂလိပ် စာပေရိပ် စကားဝါမြေစာကြည့်တိုက် ချယ်ရီမြို့တော်စာအုပ်စင် Myanmar Ebook Archive Myanmar Ebook Golden Myanmar Dhamma Web Books Dhamma Download Myanmar Dhamma Download English Burmese Classic Buddha Net Book Hive
ကလောင်ရှင်များ ဇေယျာလင်း ဆရာအောင်သင်း ဆရာမကြည်အေး ဆရာဆူးဌက် လွန်းထားထား (ဆေးတက္ကသိုလ်) မိုဃ်းဝေး ခရမ်းပြာထက်လူ သစ္စာနီ ညလင်းဖြူ ဆရာအတ္တကျော် ဆုကဗျာ မွန်းသက်ပန်(ဆေး-၁) သူရဿဝါ ပန်ဒိုရာ အိမ့်ချမ်းမြေ့ မယ်ကိုး မေငြိမ်း ခက်မာ နိုင်းနိုင်းစနေ ချော (အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) မြသွေးနီ
ပန်းချီပညာရှင်များ မြန်မာ့ပန်းချီ ဦးလွန်းကြွယ် ဦးစောလှိုင် ခင်မောင်ရင် ပန်းချီအောင်စိုး ချောအိသိဏ်း နေမျိုးဆေး မင်းဇော် ညိမ်းချမ်းစု လွန်းသစ် Magic Art လောကမှန်ကင်း
နည်းပညာမျှဝေသူများစေတန်ဂေါ့သံလုံငယ်ညီလင်းဆက် ညီနေမင်းစံပီးမောင်ပညာမောင်စေတနာ ကိုThinker ကိုရန်အောင်ကိုမင်းကျော်ကိုကျော်စွာငြိမ်းကိုဇော်357 ကို‌ဇော်(ဒဂုံ)ကိုချစ်ဦး ကိုကျော်ကျော်ဦးစပ်မိစပ်ရာစိုင်းနက္ခတ်ဖိုးသား တူလေးပုဂံသားမောင်ဘကျော်ရွှေမြန်မာတို့နည်းပညာမုန်တိုင်းရာမညဖိုးလပြည့်အလင်းရောင်အညာသားဟိုက်ဝေးအိုင်တီခရီးသည် အိုင်တီမန်းနည်းပညာမှတ်တမ်းမာ့ခ်၏ကိုယ်ပိုင်အတ္တများ မနောသား မနောဖြူလေး မိုးမြင့်ရှိန်းမိုးထက်မြင့် လုလင်တစ်ဦး၏အတွေးဆုံမှတ် မြန်မာ့သတင်းနှင့်နည်းပညာမလေးရှားရောက်မြန်မာ ဟင်းလင်းပြင်ကျနော့မှတ်စုစာအုပ် ကနက်သီရီသားလေးညီညီ(လောကမီးအိမ်)ဧရာညီနောင် အီလက်ထရောနစ်ဘုရင့်နောင်ဝိုင်း Burma IT ShareCo2'sNote STAMEDIAOgreKP3 FamilyKogee Lay WWMMMBloggerHelpdesk Myanmar DownloadMyanmarITMen My SoftwaresThememagicMonGTC Troj4n Engineer4Myanmar
❦ သူတို့တွေနဲ့အတူတူ ❧
Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ
ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက် များနဲ့ ဧကံဖြိုး
Tall Building Trends and Drivers
လွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့  အဓိပ္ပါယ် (၂)
Photoshop Application မြန်မာလိုစာအုပ်များ
လင်းငယ်၏ စာအုပ်လေး တစ်အုပ်
ဧရာဝတီသား နှင့် ချစ်သူထိပ်ထား
“ ကျွန်တော့်ကို အကူအညီပေးခဲ့တဲ့ အရေးအပါဆုံးအတွေးတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်ဘယ်တော့သေမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်မသေခင်မှာ ဘာတွေကို ဘယ်လိုအကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်သွားနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ အတွေးပါ ”
မြေပဲပါမောက္ခ ဂျော့ခ်ဝါရှင်တန် ကာဗာ
wxPyDict 0.9.1 Alpha Pre
© ချမ်းလင်းနေ. Theme images by ranplett. Powered by Blogger.